Dowlada Turkiga oo xirtay 21 Askari oo Booliis ah - Wargane News
Home Somali News Dowlada Turkiga oo xirtay 21 Askari oo Booliis ah
Ciidamada Amaanka ee dowlada Turkiga ayaa Axadii shalay xabsiga dhigtay 21 askari oo kamid ahaa Booliiska dalkaasi.
Askartan oo darajooyin kala duwan hayey ayaa lagu eedeeyey in ay si sharci daro ah u dhageysan jireen Telefonada Siyaasiyiinta iyo xubno kamid ah dowlada.
Maxkamada Turkiga ayaa shalay fasaxday in askartan xabsiga la dhigo, kuwaasi oo laga soo qabqabtay dhawr magaalo oo kala duwan.
Hawlgalkan ayaa qeyb ka ah ololaha uu wado Madaxweyne Rejeb Tayib Erdogan oo ku eedeeyey xubno kamid ah Garsoorka iyo Wasaarada Cadaalada inay qeyb ka yihiin inqilaab lagu sameenayo xukuumadiisa.
Madaxweyne Erdogan ayaa horey ugu eedeeyey mucaaridkiisa Wadaadka lagu magacaabo Fethullah Gulen oo ku nool Maraykanka inuu abaabulayey afgembiga dowlada Turkiga.
Erdogan iyo Gulen oo horey xulafo u ahaan jiray ayaa waxaa xiligan ka dhaxeeya dagaal xoogan, wuxuuna Erdogan ku eedeeyey wadaadkaasi inuu sameystay dowlad yar oo ku hoos nool dowlada Turkiga, kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiisha laamaha amaanka.
Dhamaadkii sanadkii 2013dii ayey Xeer illaalinta Turkiga bilwoday baaritaan musuq maasuq la xariira oo si gaar ah ugu wajahnaa Madaxweyne Erdogan, ganacsatada ku dhaw dhaw iyo waliba xubno kamid ah Qoyskiisa.